५ हजार ४ सय क्षमताका क्वारेन्टिन तयार : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै ५ हजार ४ सय क्षमताका क्वारेन्टिन तयार
उपत्यकामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सक्रियता
कोभिड १९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामकारबाहीको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठको टोली अनुगमनका क्रममा । टोलीले हिजो बिहीबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, खरिपाटी क्वारेन्टाइन भक्तपुर र कोरियन मैत्री नगरपालिका अस्पताल मध्यपुरठिमीको अनुगमन गरेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिले उपत्यकामा ५ हजार ४ सय ३७ बेड क्षमताबराबरको क्वारेन्टिन तयार गरेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिले काठमाडौंमा २ हजार ८ सय ३, भक्तपुरमा १ हजार ४ सय ४४ र ललितपुरमा १ हजार १ सय ९० गरी ५ हजार ४ सय ३७ बेड क्षमताबराबरको क्वारेन्टिन तयार गरेको हो ।
गृहसचिव नेतृत्वमा रहेको सो समितिले तीनवटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन निर्माणका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । समितिकै सक्रियताका कारण छोटो समयमै ५ हजार ४ सयभन्दा बढी बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण भएको हो ।
गृहसचिव न्यौपानेले उपत्यकामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि धमाधम काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौं त्यसैले छोटो समयमै क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भइरहेका छौं,’ सचिव न्यौपानले राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लमिछानेका अनुसार हालसम्म निर्माण भएका क्वारेन्टिन बेडमध्ये १ हजार ९ सय ४ बेड क्षमताको क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा छ भने १ सय ७८ जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौं । त्यसैले छोटो समयमै क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भइरहेका छौं ।
महेश्वर न्यौपाने, सचिव, गृह मन्त्रालय
एकीकृत क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक पर्ने भवनको निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरिरहेको छ । यस्तै, क्वारेन्टिन सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहमार्फत नै गरिँदै आइएको छ ।
‘यसरी बनाइएका क्वारेन्टिनमा सरकारी खर्चमा विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका र क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्नेहरूका लागि राखिएको छ । उनीहरूलाई उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये जहाँ पायक पर्छ, त्यही राखिन्छ,’ गृहका सूचना अधिकारी लामिछानेले राजधानीसँग भने ।
विदेशबाट आएका तर आफ्नै खर्चमा होटलमा बस्न चाहनेहरूलाई भने यी क्वारेन्टिनमा लगिनेछैन । उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार आउँदा नै होटल तय गरेर आउनेछन् ।
गत ४ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि थप व्यवस्थापन गर्न भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै सुरक्षा निकायका प्रथम श्रेणीका अधिकारी र क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले काठमाडौंका तीनवटै जिल्लामा रहेको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत क्वारेन्टिन स्थलको पहिचान गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लामिछानेका अनुसार अवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिनको संख्या अझै बढाइनेछ । यी एकीकृत क्वारेन्टिनको सुरक्षाको जिम्मा भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।
अरुको ज्यान देख्दा लोभ लाग्दैन, मेरै राम्रो लाग्छ : बल्छी ध्रुवे
हाँस्यकलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छि ध्रुवे’ काँचको पर्दामा लोकप्रिय नाम हो । हाँस्य टेलिश्रृङ्खलाको अतिरिक्त म्युजिक भिडियो र स्टेज शोमा समेत ब्यस्त रहने मरिचमान खिरिलो...
चुक्दै निजामती प्रशासन : ९० प्रतिशत कर्मचारी निष्क्रिय
Breaking News Roshan Shrestha - June 9, 2020 0
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहँदा स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनसमेत नराम्ररी चुक्न पुगेको छ । लकडाउनको ७६ दिनसम्म संघ,...
Editor-Picks Kumar Raut - January 4, 2021 0
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूह र...
प्रधानमन्त्रीको फोटो बिगारेर प्रकाशन गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्विरको स्वरुप परिवर्तन गरेर प्रकाशन गर्ने एक युवालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । सिन्धुली जिल्ला...
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - August 26, 2020 0
काठमाडौँ । लोकप्रिय गायक मानसराजको सुमधुर आवाजमा सजिएको गी ‘उठ्न देउ’ को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । फरक शैलीका गीत तथा पृथक शैलीको...
अवैध लागूऔषधसहित इटहरीबाट ६जना पक्राउ
प्रदेश १ Dhruba Lamsal - December 10, 2020 0
इटहरी । ईलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले अकस्मात चेकजाँच गर्ने क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, ९ र १३ बाट अवैध लागूऔषध सहित ६ जनालाई...
कम्युनिस्ट पार्टी कमाउ धन्दामा किन ?
बिचार Kumar Raut - February 26, 2020 0
निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गएको फागुन ७ गते एकाएक भाइरल बने । जसको कारण चौबीस घन्टा नबित्दै फागुन ८ गते नै मन्त्री...